Izindlu zangasese zomphakathi zezindawo ezimbi kakhulu ezenziwe yi-ZNZK China - ZNZK
Ekupheleni konyaka we-2017, uhulumeni waseTibet waqhakambisa ukubaluleka okukhulu ekwakhiweni kwamaphrojekthi "wezinguquko zangasese", futhi wazama ukunqoba inkinga yokuhlanzwa kwendlu yangasese ezindaweni ezingenamanzi. Ihlele ukwakha kabusha amathoyilethi angu-1,934 ekupheleni kuka-2018.
Ngokubheka imvelo, izimo zezulu, isimo sendawo, nezinye izinto, uhulumeni waseTibet ngokwesayensi wanquma amazinga ezokwakha, amafomu ezakhiwo nobuchwepheshe ukuqinisekisa ukuthi izindlu zangasese ezintsha zomphakathi azigcini nje ngokuhlangabezana nezidingo zangempela, kodwa zihlala isikhathi eside, zinhle futhi zihlanzekile. Kuze kube manje, sekwakhiwe inani lamaphrojekthi angama-456 “okuguqula izindlu zangasese” esifundeni, futhi angama-270 asephothuliwe.
Ngokubheka imvelo ekhethekile yaseTibet, izindlu zangasese ezingenalutho zaba izindlu zangasese ngenxa yezinzuzo zazo ezihlukile njengokonga amanzi, ukuqhuma kalula, ukungavimbeli, futhi akukho nephunga elehlukile.
Ukubekwa phambili kwezinguquko.
ZNZK kuyinto nomkhiqizi ehamba phambili yokonga amanzi cleaner toilet e China.
Isici: 0.5L amanzi nge-flush ngayinye; ngaphandle kwephunga; ukufaka nokugcina kulula.
Noma iyiphi intshisekelo? sicela uxhumane noNks Qing: qing@znzkcn.com
Isikhathi Iposi: 26-05-2021